Mpanamboatra tariby Barbecue Grill harato mpanamboatra - China Barbecue Grill wire harato mpamatsy & Factory
Ny bolongana fanary azo alefa dia antsoina koa hoe harom-baravarankely voasarona, izay mety hisorohana ny fisian'ny dian-tànana.
Nahay manokana tamin'ny famokarana sy fanondranana harona Barbecue nanomboka ny taona 2005 izahay. 300.000 ny vokatra isan'andro. Ny orinasanay dia iray amin'ireo mpamatsy ambony ny BBQ harato ao amin'ny faritanin'i Anping, izay misy ny tanàna misy harato.
Miaraka amin'ny tombony amin'ny fitsitsiana ny vidin'ny asa fanasana sy ny vidin'ny vokatra ambany, ny harato fanaovana barbecue azo nohararaotin'ny fivarotana barbecue. Ny orinasanay dia nanam-pahaizana manokana amin'ny famokarana makarakara barbecue azo ary manondrana mandritra ny 15 taona. Ny kalitaon'ny vokatra sy ny serivisy aorinan'ny fotoana dia avo laza eo amin'ny tsena. Ny antsipirian'ny vokatra natolotra: boribory boribory grill-Flat type Wire diameter 0.85mm Mesh 11mm Size 200mm, 230mm, 237mm, 240mm, 245mm, 250mm, 260mm, 263mm ...
Ny harato grill arina dia be mpampiasa amin'ny fivarotana barbecue, trano fisakafoanana, fitsangantsanganana ary fitsangatsanganana an-kalamanjana ho an'ny barbecue hena sy trondro. Ny arina tsara dia zava-dehibe amin'ny fankafizana barbecue arina, izay mety handoro lava kokoa ary hirehitra kokoa. Rehefa barbecue, soloina ny bolonganao, ny afon'ny arina mandoro ny hena amin'ny tsiro tena tsara. Ny habe malaza amin'ny harato grill harato Azo ampiasaina boribory grill-Flat type Wire diameter 0.85mm Mesh 11mm Size 200mm, 230mm, 237mm, 240mm, ...
Ny grill grill mora dia midika koa hoe bolongana fanary, izay vita amin'ny tariby vy. Misoroka ny bolongam-bary voasarona dia mety hisoroka ny fisian'ny dian-tanana. Ampiasaina be any Japon sy Korea ny fivarotana barbecue, izay afaka mitsitsy ny asa fanasan-damba sy ny toekarena ho solony. Grill harato dia afaka mitazona ny sakafonao amin'ny grill ary tsy hianjera ary mamela ny sakafo masaka mitovy isaky ny mandeha. Ny arina mandrehitra dia mahatonga ny hena ho feno fofona Arina. Ny fizotry ny famokarana: Dingana voalohany: Wire ...
Ny bolongarantsika japoney dia antsoina koa hoe japon azo atsipy any Japon. Ny harato azo ampiasaina dia ampiasaina betsaka amin'ny BBQ arina, toy ny lozisialy Hibachi japoney, lafaoro arina fivarotana BBQ japoney. Ny harato barbecue azo ampiasaina dia miaraka amin'ny vidiny mirary, tsy mila manasa, mamonjy asa, mavesatra ary mora entina amin'ny barbecue. Ny habe malaza dia atolotra anao: karazana boribory boribory-Flat type Wire diameter 0.85mm Mesh 11mm, 12mm Size 200mm, 230mm, 237mm, 240mm, 245mm, 250mm, 260mm, 26 ...
Korea grill harato dia vita amin'ny tariby vy nandrisika, izay antsoina hoe harato tariby azo esorina sy harato vy tsy miova, izay azo averina ampiasaina indray. Ny harato azo atsofoka mora vidy kokoa noho ny harato vy manify ary ny fitehirizana asa fanasana. Ny habe malaza toy ny etsy ambany: boribory grill boribory- karazana Convex Wire savaivony 0.8mm, 0.85mm harato 11mm, 11.5mm habe 330mm, 300mm, 295mm, 280mm, 270mm, 260mm, 245mm, 240mm, 230mm Boribory grill wire mesh- karazana ARC Savaivony 0.85m ...
harato fitobiana an-kalamanjana
Ny harato fitobiana an-kalamanjana dia mateza ary avereno ampiasaina. Fitaovana vy tariby vy, vy vy 304 Kilasy tsara. (tsy misy rusting, mora diovina) Size 430 * 340mm, 400 * 250mm, 560 * 410mm, 395 * 240mm (manaiky ho ampanjifaina) savaivony tariby 1.0mm, 2.5mm, 3.0mm Frame savaivony 3.5mm, 4.0mm, 5.0mm Manaova afo misy saribao ary apetrany ao anaty lafaoro izany. Ny harato grill amin'ny lafaoro dia hahatonga barbecue mitovy sakafo. Manana iray amin'ireo masinina famokarana mandroso indrindra izahay izao, Experienceen ...